ဇကားသ် ထိုက်သော ဥစ္စာပစ္စည်း(၃)မျိုးရှိပါသည်။
၂။ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသော ဥစ္စာပစ္စည်း။
၃။ အိမ်တွင်းမွေးမြူထားသော ကျွဲ-နွား-သိုး-ဆိတ် တိရစ္ဆာန်များ။
ဇကားသ်ပေးထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ် (၇)ဦးရှိသည်။
ဇကားသ် မပေးပိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်(၈)ဦးရှိသည်။
၆။ မိမိ၏ခင်ပွန်းသည် လင်ယောက်က်ျား
၇။ စိုင်ယာဒ် အမျိုးအနွယ်
၈။ ဟာရှီမီအမျိုးနွယ်တို့ဖြစ်သည်၊( ဟာရှီမီဆိုသည်မှာ )
၁၊ ဟဇရသ်ဟာရစ်ဗင်န်အဗ္ဗဒွလ် မွတ်တွလစ်ဗ်သခ်င
၅၊ ဟဇရသ်အလီသခင်တို့မှ ဆင်းသက်လာသူများကို ဟာရှီမီ အမျိုးနွယ်ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။
စာအုပ်အမည် ။.....။သအ်လီမုလ် အတ်ွဖလ်
ပြုစုသူ ။.......။ အလ်ဟာဂ်ျ မော်လာနာ ကာရီ ဟာဖစ် မုဟမ္မဒ် ယဟ်ယာ ( ဘင်န် )
အလ်ဟာဂ်ျ မော်လာနာ မွတ်ဖ်သီ ရှမ်စွဒ်ဒိုဟာ-မဇွာဟေရီ
ဟဒီးစ်ပါမောက္ခချုပ်နှင့် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဆူဖီယတ် အစ္စလာမ်သာသနာ့တက္ကသိုလ်
Posted by mbma at Saturday, August 06, 2011 No comments:
ရမသွာန်လမြတ်၏ ညများအနက် ညတစ်ညကို ကဒ်ရ် ညမြတ်ဟုခေါ်လေသည်။ ထိုညကား အလွန်ပင်မွန်မြတ် "ဘရ်ကတ်" ရှိသော ညဖြစ်ပေသည်။ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော- မြတ်၌ ထိုညကို လပေါင်းတစ်ထောင်ထက်သာမြတ်သည်ဟုမိန့်ဆိုထားပေသည်။ လပေါင်းတစ်ထောင်သည် ၈၃ နှစ်. ၄ လဖြစ်ပေသည်။
* ဟဒီးသ်တော်များတွင်လာရှိသည်မှာ ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွလလ္လာဟု) ကိုယ်တော်သည် လွန်လေပြီးသော သူများ၏ သက်တမ်းကို ကြည့်တော်မူလေရာ၊ အသက်ရှည်လွန်းနေသည်ကို တွေ့ရပေသည်။ ကိုယ်တော်၏ အွမ္မတ်သားမျာသည် ထိုပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်စာလျှင် သက်တမ်းအလွန်တိုတောင်းလှပေသည်။ ကောင်းမှုကုသိုလ်များကို လွန်လေပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တန်းတူပြုမူကြသော်လည်း ၎င်းတို့က အသက်ပိုရှည်နေသဖြင့် တန်းတူမဖြစ်နိုင်ေ ပ။ ဤသည်ကို အစားထိုးရန် ကဒ်ရ် ညမြတ် ကျရောက်လာခဲ့သည်။ ဤည ၁ဝ ည ရရှိလိုက်သူသည် တတ်က်ဒီးရ် ကောင်းသူပင်ဖြစ်ပေ သည်။ ထိုညကို အေဗာဒတ် ပြုခြင်းဖြင့် ကုန်လွန်စေလျှင် ပမာဆိုသော် ၈၃၃-နှစ်၊ ၄-လ ထက်ပိုသောပြည့်ဝသော အေဗာဒတ်၏ အကျိုးကို ရရှိပေမည်။
* အချို့ဟဒီးတော်များအရ သိရသည်မှာ.. ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွလ္လာဟု) ကိုယ်တော်က ဗနီအစ္စရာအီလ် အနက် နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်တိတိ ဂျေဟာဒ် အသျှင်မြတ်လမ်းတော်တွင်တိုက်ခိုက်
သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအကြောင်းကို ပြောပြတော်မူလေရာ ဆွဟာဗဟ် (ရသွေ့ကလ္လာဟုအန်တွ-်မ်) သခင်များသည် စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် ကြီးကျယ်နိုင်နင်းတံခိုးအာနုဘော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသောအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ကဒ်ရ် ညကို ချပေးသနားတော်မူခြ င်းဖြစ်လေသည်။
ဤသို့ပင် မြောက်များစွာသော ရေ၀ါယတ် များလာရှိပေသေးသည် ။ မည်သို့သော အကြောင်းကြောင့် ကျရောက်သည်ဖြစ်စေ ဤညသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကြီးကျယ်သော ဆုလာဘ်တော်ပင်ဖြစ် သည်။ ဤညသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အသနားတော်ဖြစ်သည်- ထိုည၌ အမလ် ပြုရန်စွမ်းအားသည် လည်း အရှင်မြတ်ပေးသနား တော်မူမှသာလျှင် ရမည်ဖြစ်လေသည်။
* "အင်န်နာ အန်ဇလ်နာဟို့ ဖီးလိုင်း လသေ့လ် ကဒ်ရ်"… ဧကန်အမှန် ငါအသျှင်မြတ်က ကုရ်အာန်ကျမ်းတော် မြတ်ကို ကဒ်ရ်ညဥ့်မြတ်၌ ချပေးတော်မူခဲ့သည် ။
ဤညကား ချမ်းမြေ့ခြင်းအတိ ပြီးလေသည်။ ဆိုလိုတော်မူသည်မှာ.. တစ်ညတာလုံး ဖွရစ်ရှတဟ် များဘက်မှ မုအ်မင်န်များအတွက် ချမ်းမြေ့ခြင်းများ သက်ရောက်နေပေသည်။ တစ်သုတ်လာ၍ ပြန်သွားကြလေရာ တစ်သုတ်က ဆင့်ကဲရောက်လာကြပေ သည်။
ထိုညသည် (ထိုဘရ်ကတ်များဖြင့်) တစ်ညလုံး ဖွဂျရ်အချိန်ထိနေလေသည်။
ကဒ်ရ်ညဥ့်၌ အေဗာဒတ်ပြုသူသည် တစ်သက်လုံးပြုခဲ့သော ဂိုနာဟ်များမှချမ်းသာရခြင်းအကြောင်း
ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွလလ္လာဟု) ကိုယ်တော်က မိန့်တော်မူသည်မှာ .. အကြင်သူသည် ကဒ်ရ်ညမြတ်၌ အီမာန်နှင့်တကွ သဝါဗ်၏ မက်ဖြင့် (အေဗာဒတ် ခဝတ်ရန်အတွက်) ရပ်လျှင် ထိုသူနောက်နောင်က ကျူးလွန်ခဲ့သော ဂိုနာဟ်များကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့် ပေးတော်မူလေသည်။
* ရပ်လျှင်ဟူ၍ မိန့်ဆိုခြင်းမှာ …. နမာဇ်ဝတ်ပြုနေခြင်း၊ ၎င်းအခြားသော အေဗာဒတ် ကုရ်အာန်ကျမ်းတော် မြတ်ကို ဖတ်ခြင်း၊ သစ်က်ရ် စသည်များ၌ မွေ့လျော်နေခြင်းဖြစ်ပေသည်။
သောင်ဗဟ် ဆိုသည်မှာ နောက်နောင်က ပြုမူခဲ့သည်များကို သံဝေဂရ၍ ရှေ့တွင် မကျူးလွန်တော့ကြော င်း ဝန်ခံချက် ပေးခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့်အကြင်သူသည် ဂိုနာဟ်ကဗီရဟ်များ ကိုလည်း ကျူးလွန်ခဲ့သူဖြစ်လျှင် ကဒ်ရ်ညမြတ် ၎င်း မည်သည့် အေဗာဒတ် ပြုရာ၌ မဆို မိမိကျူးလွန်ခဲ့သည်များကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ ဝန်ချတောင်းပန် သောင်ဗဟ်ပြုရန် သင့်ပေသည်။ သို့မှသာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ပြည့်စုံသော ရဟ်မဟ် သက်ရောက်ပေမည်။ ဂိုနာဟ်အကြီးအငယ်များလည်း ချမ်းသာပေးမှုရရှိေ ပမည်။
ကဒ်ရ်ညဥ့်ကို မရသူသည် လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း
ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွလလ္လာဟု) ကိုယ်တော်က မိန့်တော်မူသည်မှာ .. သင်တို့အပေါ်၌ လတစ်လရောက်လာပေပြီ ။ ထိုလထဲမှ ညတစ်ညသည် လပေါင်းတစ်ထောင်ထက် သာမြတ်ပေသည်။ အကြင်သူသည် ထိုညကို လက်လွတ်သွားလျှင်- ဥပမာဆိုသော်.. ကောင်းမှုအပေါင်းများ လက်မဲ့ဖြစ်သူပင်ဖြ စ်ပေသည်။ ထိုည၏ ကောင်းမှုများမရရှာ ပေ။ သို့သော် ထိုသူသည် အမှန်ပင် မရထိုက်ခြင်းကြောင့် လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ အမှန်မှာ ထိုသူသည်ဤမျှကြီးကျယ်သော စည်းစိမ်ကို လက်လွှတ်ခဲ့သဖြင့် ထိုသူ လက်မဲ့ဖြစ်နေခြင်း မှာ စဉ်းစားတွေးတောနေရ န်မလိုပေ။ မီးရထားအလုပ်သမားများသည် ငွေအသာပြာအနည်းငယ် အတွက် တစ်ညလုံးမအိပ်စက်ပဲကုန်လွန်စေကြသည်- အကယ်၍ နှစ်ပေါင်း ၈၀- အေဗာဒတ် အတွက် တစ်ညမအိပ်ပဲနေလျှင်ခဲယဉ်းဖွယ်ရာမရှိေ ပ။
* ရှဒ်ဒါဒ် (ရသွေ့) သခင်သည် တစ်ညလုံး လူးလွန့်၍ကုန်လွန် စေသည်။ အို.. အသျှင် မီးလျှံကို ကြောက်ရွံ့မှုက ကျွန်တော်မျိုးအား သက်သက်သာသာအိပ်စက်မှုကို ပျက်စီးစေပါသည် ဟုမိန့်တော်မူလေသည်။
* စွေလဟ်ဗင်အသီမ် (ရဟေ့) သခင်သည် တစ်ညလုံးနမာဇ်များ ဖတ်တော်မူပြီး နံနက်တွင် ဒိုအာတောင်းသည်မှာ ၊ အို… အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ် ကျွန်တော်မျိုးသည်ဂျန္နတ်ကို တောင်းနိုင်သော စွမ်းအားမရှိပါ။ ကျွန်တော်မျိုးကိုမီးလျှံ၏ ဘေးမှ ချမ်းသာပေးတော်မူပါရန်ကိုပင် တောင်းဆိုအသနားခံပါ၏။
* အေမာမ်ရှာဖွေအီ (ရဟမတွလ္လာဟ်) သခင်သည် ရမသွာန်လမြတ်၌ နေ့-ည နမာဇ် များတွင် ကုရ်အာန် ကျမ်းတော်မြတ်ကို အစအဆုံး အကြိမ် (၆၀) ဖတ်တော်မူလေသည်။
ကဒ်ရ်ညမြတ်၌ ကောင်းမှုပြုသူ၏ ဂိုနာဟ် ချွတ်ကယ်တော်မူခြင်းအကြောင်း
ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွလလ္လာဟု) ကိုယ်တော်က မိန့်တော်မူသည်မှာ .. လိုလတွလ်ကဒ်ရ် ညဥ့်မြတ်၌ ဂျစ်ဗ်ရာအီလ် (အလိုင်ဟစ္စလာမ်) သခင်သည် ဖွရစ်ရှတဟ် ကောင်းကင်တမန်တော်- များနှင့်အတူလောကကိုဆင်းသက်လာတော်- မူလေသည်။ ထိုင်လျက်ဖြစ်စေ၊ ရပ်လျက်ဖြစ်စေ၊ အိပ်လျောင်းလျက်ဖြ စ်စေ အေဗာအတ် နှင့် သစ်က်ရ်ပြုနေသူများကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရဟ်မတ် မဟာကရုဏာ သက်ရောက်စေရန် ဒိုအာ ဆုမွန်များပြုကြပေသည်။
ရှိုင်ခ်အဗ်ဒွလ်က- ဒင်ရ်ဂျီလာနီ (ရဟမတွလ္လာဟ်) သခင်က ဂွန်ယဟ် ကျမ်းတွင် အစ်ဗ်နိုအဗ်မာစ် (ရသွေ့) သခင်၏ ဆင့်ပြန်ချက်ကို ရေးသားထားသည်မှာ … ဖွရစ်ရှတဟ်များ သည် ဂျစ်ဗ်ရာအီလ် ( အလိုင်ဟစ္စလာမ်) သခင်၏အမိန့်အရ မြို့၊ ရွာ၊ တော၊ တောင်၊ ပင်လယ်၊ သမုဒ္ဒရာ စသည့်မူစလင်များရှိသရွေ့ နေရာတိုင်း၌အီးဒ်ေ န့တွင် သွားရောက် လက်ဆက်ကြပေသည်။ သို့သော် ခွေး၊ ဝက်၊ ဇေနာမူကြောင့်ရေချိုးရန်ရှိသူ၊ သက်ရှိသတ္တဝါပုံရှိသော အိမ်များသို့မူ မဝင်ရောက်ကြပေ။
* ကဒ်ရ်ညသည် ရမသွာန်လ နောက်ဆုံး ၁၀ ရက်၏ 'မ'ရက်များတွင်ရှိသည်။ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉ ။
ကဒ်ရ်ညဉ့်မြတ်တွင် တောင်းဆိုရန် ဒိုအာအကြောင်း
"အလ္လာဟ်ဟွမ်မ အန်န်နက အဖုဝွန် တို့ဟစ်ဗွလ် အဖ်ဝ ဖအ်ဖို့အန်နီ" ..
အဓိပ္ပာယ်မှာ၊ "အို… အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ် ဧကန်မုချအသျှင်သည် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ပေးတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပါ သည်။ ၎င်းချမ်းသာပေးမှုကိုလ ည်း နှစ်သက်တော်မူသော အရှင်ဖြစ်တော်မူပါ သည်။ သို့ရှိရာ ကျွန်တော်မျိုး/ မ ကိုလည်း လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသနားတော်မူပါ" ။
စွဖ်ယာန်သောင်ရီ ( ရဟမတွလ္လာဟ်) သခင်က မိန့်တော်မူသည်မှာ … ထိုည၌ အခြားသော အေဗာဒတ်များ ဆောက်တည်မည့်အစား ဒိုအာ၌ ပင် မွေ့လျော်ခြင်းက သာကောင်းလေသည်။
အစ်ဗ်နို့ရဂျမ် (ရဟမတွလ္လာဟ်) သခင်က မိန့်တော်မူသည်မှာ… ဒိုအာသက်သက်ပင်မဟုတ်ပဲ အခြားသော အေဗာဒတ်များ ဆောက်တည်ခြင်းက ပို၍မြတ်လေသည်။ ဥပမာ။ ။ ကုရ်အာန် ကျမ်းတော်မြတ် သရဇ္ဈာယ်ခြင်း၊ နမာဇ်ဝတ်ပြုခြင်း- ဒိုအာဆုမွန်တောင်- ခြင်း၊ မိုရာကဗဟ် စသည်များဖြစ်လေသည်။
ရစူလွလ္လာဟ် (ဆွလလ္လာဟု) ကိုယ်တော်က မိန့်တော်မူသည်မှာ.. ဤသည်သော ကုသိုလ်များပွားကြရန် လာရှိသဖြင့် အားလုံးသော အေဗာဒတ်များပြုမူကြရန် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပေသည်။
Posted by mbma at Tuesday, July 05, 2011 No comments:
၆၄ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ ဖိတ်ကြားလွှာ
၆၄ကြိမ်မြောက်မွန်အမျိုးသားနေ့ မိတ်စုံစားပွဲကို လာရောက်အားပေးကြပါရန်ဖိတ်ကြားပါသည်..
Posted by mbma at Wednesday, February 16, 2011 No comments: